I-Ascension - Amalungu asondeleyo amaBali aThintelweyo · Oyoun | Inkcubeko yokucinga kwakhona
Epreli 9, 19 am - 21: 00
« a'21: IMotavali 2 | Imisebenzi yamajelo eendaba_New Media Society
Uvavanyo lweFilimu eUngabonakali emzimbeni: "Nakorn-Sawan" »
I-Ascension ngumdlalo weqonga- sisiphumo seprojekthi yexesha elide malunga nesini, ubufazi kunye nokuya exesheni. Iprojekthi ibandakanye abathathi-nxaxheba kwingxoxo-mpikiswano yoluntu ukuze ibonakalise ukulingana ngokwesini kunye notshintsho kwezentlalo. Iprojekthi ivavanye ukuba sexesheni, iitabo, kunye nesazisi kuzo zonke iindlela ezinokubakho ezinje ngembali, ezopolitiko, eziqulethwe, inkcubeko, inkolo, ezentlalo, ezempilo kunye nokukhathazeka kwezobugcisa.
Abathathi-nxaxheba bathathe inxaxheba kwiindibano zocweyo ezazixubene nobufazi kunye neentlungu, ezikhokelela kwisiphumo sokugqibela somdlalo weqonga esiza kuwunikela kuwe ngexesha UMTSHATO WOBUGCISA OBUMISELWEYO eOyoun.
Oomasifundisane / ukuzilolonga kwaqala ngoJanuwari ukubonelela ngendawo ekhuselekileyo yokunxibelelana nobufazi, iintlungu, unyango, kunye nokuzibandakanya ngokuhlangeneyo kunye neengxoxo nabanye abantu basetyhini. Kuyo yonke iprojekthi, abathathi-nxaxheba babe nethuba lokuzibandakanya neenkcazo-ntetho kunye neenkomfa / iingxoxo kwi-Intanethi malunga nemicimbi yesini kunye neetabo. Iprojekthi ijolise ekwakheni ingxoxo yoluntu malunga nezo taboos kunye neekona ezingavumelekanga zomzimba wabasetyhini.
Umdlalo uya kulandelwa yingxoxo nomlawuli kunye nabathathi-nxaxheba. Siza kulandela yonke inkqubela phambili yeemvakalelo, zomzimba kunye nezobugcisa kuyo yonke iprojekthi: ukusukela ekuqaleni kude kube sekupheleni.
Ukunyuka kwaqalwa kwaye kwakhokelwa nguGqr. U-Maiada Aboud, umsebenzi wakhe ujongana neendlela zokunxibelelana kwezentlalo kunye nezenkolo kunye nefuthe lomntu. Uzama ukudibanisa uhlalutyo lwentlalo nenkcubeko kumava omntu ngokusebenzisa indlela yokusebenza kunye nokunxulumana nobomi benkcubeko nezentlalo.
Abathathi-nxaxheba beprojekthi: UAntonia Führ, uChristina Gabriela Galli, uMaria Trinks kunye no-Uli Pilwax
Esi siganeko siza kusasazwa kwiOyoun's bedlala, YouTube kwaye Facebook iziteshi.
Abalondolozi, amagcisa kunye neengcali zenkcubeko baye baphonononga izazisi, ezabo kunye neenkumbulo eziqulethwe nge-diasporic, decolonial kunye neembono zokumangalelwa njengenxalenye yokugxilwa kwabaphathiswa bokuqala be-Oyoun: IITESHINI EZIMISELWEYO. Iziphumo, ukudibana kunye nemibuzo ziya kwenziwa kwaye zibhiyozelwe ngexesha le- UMTSHATO WOBUGCISA OBUMISELWEYO ukusuka nge-8 ukuya kwe-18 ku-Epreli. Jonga yonke imicimbi Apha.